गल्कोट भरीका गाउँ-ठाउँ, जहाँ पुग्दैनन बस-जीप, त्यहाँ गुड्छन ट्याक्सी …! – ebaglung.com
गल्कोट भरीका गाउँ-ठाउँ, जहाँ पुग्दैनन बस-जीप, त्यहाँ गुड्छन ट्याक्सी …!
२०७५ पुष ९, सोमबार १२:१६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ पुस ९ । गल्कोटमा पहाडी भुभाग भए पनि यहाँका सबै गाउँमा ट्याक्सी चढेर घुम्न सकिन्छ । बस र जिप चल्न नसक्ने सडकमा पनि ट्याक्सी चल्छन । गल्कोटमा बिदेशबाट फर्केने अधिकांश ब्यक्तिहरु ट्याक्सी चढेर घरमै पुग्न पाउँदा दंग पर्छन ।
तीन वर्षअघि स्वदेश आउँदा ट्याक्सी नचले पनि अहिले ट्याक्सी चढन पाईने सुविधा थपिएकोे गल्कोटेहरुको भनाई छ । गल्कोट सडकको हिसाबले नमुना मानिन्छ । जहाँ टोलैपिच्छे सडक खनिएका छन् । निजी लगानी र चन्दा उठाएर गाउँलेले आँगनमै बाटो पुयाएका छन् । अधिकांश सडकमा ट्याक्सी गुड्छन् । बिरामी परेका बेला र अन्य कामले हटियाबाट सबैले ट्याक्सी बोलाउँछन । हटिया आएका यात्रुले बजारमा रात बिताउनु पर्दैन । अहिले टोल–टोलमा ट्याक्सी गुडदा बस्ती फेरिएको छ ।’ दशक अघिसम्म बागलुङ बजारमा गाडीमा ओर्लेपछि भरियालाई भारी बोकाएर पैदल हिँडेर घर आइपुग्न दिनभर लागेको स्मरण धेरैले सुनाउने गर्छन् ।
गाउँ गाउँमा मोटरबाटो, बिजुली, इन्टरनेट सबै सुविधा छ,स्कुल, स्वास्थ्य चौकी छन । गाउँमा बारीमा उब्जेको ताजा तरकारी खान पाइन्छ, स्वच्छ हावापानी छ, सहरमा बसाइँ सर्नु पर्दैन । चालक तारा बहादुर बिकले गल्कोटका सबैजसो बाटोमा ट्याक्सी कुँदाएका छन् । ‘ट्रयाक्टरले अलि बाटो बिगार्छ, वर्षामा खाल्डाखुल्डी र हिउँदमा धूलो तर्काएर भए पनि यात्रुलाई गन्तव्यमा पुयाउँछु बिक भन्छन्, ‘धेरैका घर जाने साँधुरा बाटा छन् । त्यसमा जिप तथा बस जान सक्दैनन् । हामी जान्छौं ।’
यात्रुले जति बेला फोन गरेर बोलाए पनि सेवा दिन तयार रहेको उनले बताए । गल्कोट यातयात प्रालिका महासचिव गगन कुबरका अनुसार चार वर्षअघि गल्कोटमा एउटा ट्याक्सी भित्रियो । त्यसपछि बर्षै पछि थपिदै गएका छन । गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अन्य वडामा भन्दा बाटो राम्रो भएको चालकको अनुभव छ ।
गल्कोटको गाउँ-गाउँमा ट्याक्सी सेवा ! हटिया देखी कुन ठाउँलाई कति ? यस्तो छ, भाडा दर !
गल्कोट नगरपालिका भित्रका मोटरबाटो निर्माण र स्तरोन्नतिमा लाखौँ रकम विनियोजन !
विश्वकर्मा समाज नेपाल (यूएई) द्वारा ढोरपाटन–९ ढोर नवीका अग्नी पीडितहरुलाई राहत वितरण !